दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सरकारको सम्बोधन खोई ? - Jhilko
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सरकारको सम्बोधन खोई ?
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले लकडाउन गरेपछि काठमाडौंको क्षेत्रपाटी सडकमा कामको खोजीमा काभ्रेपलाञ्चोकका ५७ वर्षीय रिक्साचालक डम्बर पन्तको फोटोले सामाजिक सञ्जाल पूरै छायो । दैनिक काम गरेर आफू बाँच्ने र परिवार पाल्नुपर्ने भएकाले लकडाउनले नराम्रोसँग प्रभाव पारेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
यो एउटा पीडदादायी प्रतिनिधि घटना हो । उनी र उनी जस्तै धेरैलाई कोरोना भाइरसभन्दा भोक भाइरसले सताएको छ । दैनिक नकमाउने हो भने उनीहरु र उनीहरुको परिवार बाँच्न सक्तैनन् । दैनिक काम गरेर आएको ज्यालाबाट बाँच्ने काठमाडौंसहितका शहर र गाउँमै पनि कति श्रमिक होलान ? हामीसँग त्यसको लेखाजोखा छैन ।
वास्तवमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कहर विश्वभरि नै छ । हाम्रो देशलाई पनि यसले ठूलो चपेटामा पारेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसलाई रोक्न र फैलन नदिन लकडाउनसहित थुप्रै कदमहरु उठाएको छ । लकडाउनको थोरै दिनमा नै बजारको अवस्था गम्भीर र खराव हुने संकेत देखिएको छ । कालोबजारियाहरुले यो संकटको लाभ लिने अवस्था देखिएको छ । एकाध ठाउँमा अनुगमन गर्न गएर कालोबजार बन्द हुँदैन, यसका लागि कालोबजारियाको पहुँचवाला ठाउँसँगको धागो छिनाल्न सक्नुपर्छ । मानवतामाथि नै यति ठूलो विपत्ति आइपरेका बेलामा त्यसलाई लाभ मानेर कालोधन्दा गर्ने जोसुकै हुन, तिनलाई निर्ममतापूर्वक कार्वाही गर्नैपर्छ । म आफू मन्त्री हुँदा त्यसका विरुद्ध लडें तर विभिन्न तगारोलाई छिचोलेर बजारमा सरकारको उपस्थिति स्थापित गर्न नसकेकै हो । अहिले त झन् गम्भीर संकट छ । यसबाट पार पाउन सबैले जोड गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा यतिवेला भीषण युद्धको अवस्था छ । विश्व नै कोरोना भाइरस जस्तो अदृश्य शत्रुका विरुद्ध युद्ध लडिरहेको छ । यो विशिष्ट अवस्था हो । यतिवेला सामान्यभन्दा फरक र तीब्र रुपमा आउने समस्याको समाधान तीब्र ढंगले नै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । तीब्र गतिमा चल्नुपर्ने हाम्रो सरकार कछुवाको गतिमा मात्र चलिरहेको आभास भएको छ । यतिवेला जनताले कुरा होइन कामको बढी अपेक्षा गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आर्थिक संकटमा परेको छ । नेपाल जस्तो विकासशील देश यसबाट नराम्रोसँग प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन । आर्थिक भन्दा पनि यतिवेला मानव जीवनको मूल्य महत्वपूर्ण छ । यसो भनेर दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउन छाडौं भनेको होइन । कोरोना भाइरसका विरुद्धको युद्धकालीन आर्थिक योजना बनाउन तत्काल अत्यावश्यक छ, आगामी संकटबाट कसरी पार पाउने र तत्काल जनताको जीवन कसरी बचाउने भनेर जान ढिलाइ गर्नैहुन्न ।
लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालामा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका श्रमिकहरुलाई सबैभन्दा बढी सताएको अवस्था छ । विश्वका कतिपय देशले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, एकदमै कम आय भएका, गरीवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्याकेज ल्याएका छन् । नेपाल सरकारले पनि तिनलाई प्राथमिकता दिएरर तत्काल प्याकेज ल्याउनु पर्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन लम्बिदै जाने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल सरकारले चैत्र १८ गतेसम्मका लागि मात्र लकडाउन गरेको छ । भारतले चैत्र ११ देखि तीन हप्ताका लागि लकडाउन गरेको छ । खुल्ला सीमाका कारण त्यहाँको कदमले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्छ । नेपालमा अप्रत्यासित लकडाउन हुँदा र लकडाउनका अवस्थाका बारेमा कतिपयलाई जानकारी नहुँदा विद्यार्थीसहित थुप्रै मान्छेहरु देशभित्र नै अलपत्रमा परेका छन् । तिनलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि सरकारले पहल गर्न जरुरी छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको स्थिति त एक हप्ताको लकडाउनले नै बेहाल बनाएको छ । गरीवीको रेखामुनि रहेका जनताको अवस्था आगामी दिनमा झन् समस्याग्रस्त हुने निश्चित छ । आफ्नो उत्पादनको केही हिस्सा बजारमा लगेर निर्वाह गरिरहेका गाउँका साना किसान र खेतीहर मजदुरहरुलाई लकडाउनका कारण नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको छ । त्यो पनि समस्या हो तर तत्कालको समस्या भनेको गरीवीका रेखामुनि रहेका जनता, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको हो ।
सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई तिमीहरु जहाँ छौं हामी त्यही आउँछौ, भोकै मर्न दिदैंनौ भनेर भनिसक्नुपथ्र्याे । कोरोना भाइरसको चिन्ता गर्दागर्दै भोक भाइरसबाट मर्न त दिनु भएन नि श्रमिकलाई । यस्तै संकटको बेलामा त सरकार, राज्य जनतालाई बढी चाहिने हो ।
यतिवेला बजार बन्द छ । उद्योगहरु बन्द छन् । व्यवसायहरु बन्द छन् । नांग्लो पसल चलाउने, साइकलमा सामान बेच्ने मजदुरहरु कसरी खाएका होलान ? अनि उनीहरुले काठमाडौंसहित शहरका महंगा भाडा कसरी बुझाउन सक्छन ? व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि यो संकटमा आवश्यक राहतको व्यवस्थाको घोषणा गरी आर्थिक गतिविधिलाई सहज र अगाडि बढाउन मद्धत गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई श्रमिक, उद्योगी, व्यवसायीको अवस्थाको अध्ययन गर्न लगाएर तत्काल प्याकेजको व्यवस्था गरौं । केही रकम नै दिऔं, जसले उनीहरुको तत्कालको समस्याको समाधान होस् । दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरुलाई कोरोनाको भन्दा पनि खाने बस्नेको चिन्ता छ । घरबाट वाहिर ननिस्कदा जिन्दगीको रथ चल्दैन ।
सडकमा कामको खोजीमा काभ्रेपलाञ्चोकका ५७ वर्षीय रिक्साचालक डम्बर पन्तको पीडामा मल्हम लगाउने सरकार हुनुपर्यो । हरेक क्षेत्रमा योजना र पारदर्शितामा कमीका कारण समस्या परिरहेको छ । तत्काल सच्याइएन भने यो बढ्दै जानेछ । यसले विकराल रुप लिनसक्छ । कुराकानीमा आधारित
कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या अमेरिकामा सबै भन्दा बढी पुग्योे
प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ्य, त्रि.बि. शिक्षण अस्पताल भर्ना
पहिलोपटक होटल बुक गर्न आएका पाँच पर्यटकलाई भाग्यमानी पर्यटकका रूपमा स्वागत गरी एक...
आफ्नो देश फर्की जाऊ भन्दै अमेरिकामा सिख धर्मगुरूमाथि हातपात
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित सिख धर्मको धार्मिकस्थल गुरूद्वाराका धर्मगुरूमाथि नश्लीय...